सानिया मिर्जा: विवाह पछि एन पछि - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
सानिया मिर्जा: विवाह पछि एन
घर सुन्दरता महिला फेसन महिला फेशन ओआई-अम्रिशा द्वारा आदेश शर्मा | प्रकाशित: बिहिबार, नोभेम्बर २ 2012, २०१२, १:26:२:26 [IST]
हामी प्रायः सोच्दछौं कि एक खेल-व्यक्ति फैशनिस्टा हुन सक्दैन। तर, त्यहाँ धेरै फेसनल खेल खेलाडीहरू छन् जसले सब भन्दा ग्लैमरस सेलेबसँग कडा र समान प्रतिस्पर्धा गर्छन्। उदाहरणका लागि डेभिड बेकहम, रोनाल्डो, विराट कोहली वा धोनी लिनुहोस्। तिनीहरू सुन्दर, फेसनशील र लोकप्रिय खेलकुद हुन्।
यो होइन कि खेल खेलाडी बहु प्रतिभाशाली हुन सक्दैन। त्यहाँ केहि भारतीय खेल-व्यक्ति छन् जसले फेसनको विश्वमा आफ्नो योग्यताको प्रमाण दिएका छन्। यो पुरुष होस् वा महिला, हामी सबैले र्याम्पमा खेलाडीहरू कहिले पनी आशा गर्दैनौं! एक पलको लागि सानिया मिर्जा वा मेरी कोमको उदाहरण लिनुहोस्। भर्खरै, यी दुई स्पोर्ट्स महिला विभिन्न क्षेत्रका प्रसिद्ध फेसन डिजाइनरहरूको लागि र्‍याम्पमा हिंडे।
सानिया मिर्जा लन टेनिस खेलाडी हुन् जबकि मेरी ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता। मेरीले भर्खरै फेब्रिक २०१२ मा मिजवान सोनेट्समा र्याम्पमा पदयात्रा गरिसकेकी छिन्। गुलाबी फुल लम्बाई अनारकली सूट लगाएर मरियम स्त्री र क्लासी देखिन्। कसैले पनि भन्न सक्दैन कि बक्सि you्गले तपाईंलाई मर्दो देखिन्छ! सानिया पनि र्याम्पमा केहि कार्यक्रमहरूमा क्याटवाक गरिरहेको देखिन्छ। यस अघि हामीले सानियालाई ब्लेन्डर प्राइड फेसन टुर २०१२ मा देख्यौं र त्यसपछि हामीले उनलाई ग्लोबल पीस फेशन शोमा र्याम्पमा भेट्यौं।
सानिया पहिलो भारतीय महिला थिइन जसले फेसनमा नाकको औठी फिर्ता ल्याई। याद गर्नुहोस् कि मिडियाले उनलाई पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिकसँग कसरी विवाह गरे? फेसन डिजाइनरहरू पनि यी प्रख्यात खेलाडीहरूको लुगा लगाउन चाहन्छन जसले आफ्नो प्रतिभाको साथ देशलाई गौरव दिन्छन्। जब फेसन र ड्रेसिंग सेन्सको बारेमा कुरा गर्छौं, सानिया पहिले त्यती ट्रेंडी थिइनन्। यद्यपि, उनको शैलीको भाग्य ख्याति र पैसाको साथ परिवर्तन भयो जुन भित्र बग्यो! सानिया मिर्जालाई उनको विवाहको अघि र पछाडि एक नजर दिनुहोस्।
सानिया मिर्जा, विवाह अघि र पछाडि:
सानिया धेरै खेलकुदको साथ उनको खेल छवि बोक्ने गर्थिन्। छोटो स्कर्ट, टी-शर्ट र क्यापहरू सँधै त्यहाँ थिए।
चश्मा र नाकको औठी
उनको ख्यातिमा बृद्धि हुँदा सानियाले उनको फेसनदार चश्मा र नाकको औंठीको लागि लोकप्रियता लिन थालिन्। उनले शैली र आरामको साथ परम्परागत नाकको औंठी लगाइन्!
केही टूर्नामेन्टहरू जितिसकेपछि, प्रसिद्धि र पैसाले उनको शैली योगफलमा परिवर्तन ल्यायो। उनी बेलुका बेलुका लुगा, मेकअप, काजल र हाई हिलमा आउन थालिन्।
उनको सगाईमा सानिया परम्परागत एक्वा निलो र सुनहरी लेहेंगामा सुन्दर देखिन्।
खेलकुद व्यक्तिको विवाह पोशाक वाह देखियो! रातो रंगको लेहेंगा जोडी शान्तनु र निखिल द्वारा डिजाइन गरिएको थियो।
डिजाइनर जोडी शान्तानु र निखिलका लागि सानिया ब्लेन्डरको प्राइड फेसन टुरमा र्याम्पमा थिइन्। शाही निलो साडी गाउनमा सानी सानियाले विवाह भैरहेको देखिन्छ।
भर्खरै वाक अफ पीस फेशन शोमा सानियाले डिजाइनर नीता लुल्लाको लागि क्याटवाक गर्छिन्। उनले कालो धागो कार्य सीमा र कालो हाई हिलको साथ सेतो अनारकली सूट दान गर्छिन्।
गर्मी मा सुख्खा छाला को लागी फेस प्याक
कसरी गोट्टा परावी बनाउने
पेटको बेल्ट c खण्ड वितरण पछि
विलियम शेक्सपियरको जन्म मिति
के कारण उमेरमा सेतो कपाल हुन्छ